Sevhisi - Chinatown Zviyo Machinery Co., Ltd.
Isu takagadzira mhando yemachina uye ehunyanzvi mhinduro dzeiyo zviyo zvese, mafuta anodyiwa uye ekugadzirisa indasitiri cheni, senge kuunganidza, kuchengeta, kuchenesa, kukora, sieving, kukuya, kusanganisa, kugadzira, chimiro kuumba, uye kurongedza.
Sehunyanzvi hweindasitiri mhinduro mutengesi, isu tinopa zvakawandisa kupfuura michina chete, asi inoshanda mhinduro mhinduro dzinogona kuvandudza vatengi 'ese kukosha kwecheni. Munguva yekusimudzira, hatimbofuratira chero matambudziko uye mikana yekukwanisa zvigadzirwa zvedu, uye ndiwo maitiro atingaite kuchengetedza chinzvimbo chedu chinotungamira muindasitiri.
Michina yedu anoshandiswa nevakawanda mudzimba vanozvishandisa. Uye yedu yekumisikidza-kiyi mapurojekiti uye imwechete michina yakaendeswa kuThailand, Burma, Australia, Sri Lanka, Italy, Germany, Chile, Argentina, Brazil, Ukraine uye nedzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu. Vatengi vazhinji kutenderera pasirese vakashanyira kambani yedu pane bhizinesi.Tinogamuchira nemutsa vatengi uye takavapa mhinduro dzakanakisa nemhando yepamusoro michina uye technical services, uye isu takagamuchira kukwirira kwakakwirira kubva kwavari.